Maitiro ekumisikidza bhatiri yekuchengetedza modhi pane iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Maitiro ekumisikidza Battery Saver modhi pane Apple Watch
Apple payakaunza iyo Apple Watch muna Gumiguru 2014, vashandisi vazhinji vaishamisika kana bhatiri raigona kumira zvakakwana zuva rakabatikana kubasa. Pakazosvika pamusika, taigona kuona mashandiro eOSOS achishandisa mashandisiro ebhatiri zvakanaka, asi dzimwe nguva, kunyanya pamazuva marefu, taizopererwa nebhatiri. LMhando nyowani dzeApple Watch, Series 1 uye Series 2 inotipa kuzvitonga kuzere kuti pamwe neprosesa yayo nyowani inotibvumidza kutsungirira zuva rakaoma rebasa pasina matambudziko, kunyangwe 2, kunyanya neiyo Series 2.
Kana tangojaira kupfeka wachi zvakare, zvinoshamisa kuti isu tirege kuipfekedza pachiuno chedu kuti tione nguva, chimwe chinhu chataive tatojaira kana tichivimba nenhare yechinangwa icho. Kana nguva dzichifamba tichiona kuti bhatiri remudziyo wedu riri kudzika nekukurumidza zvakanyanya kana kunyangwe isu tichiziva kuti zuva redu rebasa richareba kupfuura nguva asi isu tichida kuramba tiine nguva paruoko rwedu, chakanakisa chatingaite kudzima kutaurirana newachi uye izvo zvinongoratidzira chete nguva isina zviziviso zverudzi rupi zvarwo.
Battery saver mode inobvumira bvisa zvese kutaurirana kubva pawachi uye uratidze chete iyo nguva. Nokutadza iyi nzira inogona kumisikidzwa kana bhatiri reApple Watch richidonha kusvika pa10%, asi isu tinogona zvakare kumisikidza nemawoko. Kuti tiite iyo Battery Saving mode tinofanirwa kutevera anotevera matanho.
Batidza Apple Tarisa Battery Saver modhi
Kutanga tinoenda kuControl Center yeApple Watch, tichitsvedza kubva pasi kusvika kumusoro kwechiso.
Isu tinodzvanya pane iyo chikamu inoratidza yazvino bhatiri nhanho.
Ipapo tinotsvedza munwe wedu pa icon inoratidza kuchengetedza kweBattery kuitira kuti iitwe.
Chidzitiro chinoratidzwa kutizivisa isu kuti kutaurirana neiyo iPhone kucharasika uye kuti chete ndiyo nguva inozoratidzwa. Isu tinongofanirwa tinya pane Tevedzera kuti umise iyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekumisikidza Battery Saver modhi pane Apple Watch
MarginNote Pro yeMac, hafu yemutengo wenguva yakatarwa
Iyo Apple Watch ndiyo inotengesa zvakanyanya smartwatch pasi rose, inopfuura Fitbit